Cod uye shrimp burgers ine tartar muto - Thermomix Recipes | ThermoRecipes
Cod uye shrimp burgers ine tartar muto
Hove15 maminitsi8 vanhu40 makarori
Iyo cod ne prawn burgers ndiyo yepakutanga imwe nzira kune yechinyakare flavour yeIsita uye, panguva imwecheteyo, iri nyore nzira yekuipa. kubata kwazvino kune imwe yezvinyorwa zvenyeredzi zvenguva ino.
Kuti uite ma burgers aya, chinhu chimwe chete chaunofanirwa kufunga nezvacho ndeye munyu wecod. Kana muchida dzidza kugadzira munyu cod uye tora iyo optimum poindi usapotsa matipi atakakugadzirira iwe.
Aya burgers anogonawo kugadzirwa nawo cod nyowani. Iyi imwe nzira iri nyore kunyangwe isina pfungwa yakafanana nemunyu.
Takaperekedza mahamburgers nawo tartar muto. Iyo muto unobva pane mayonnaise uye kune iyo yakabikwa zai uye pickles inowedzerwa.
Iwe unoda here muto kuperekedza yako yemuriwo kana hove ndiro? Edza iyi tartar muto nemucheka uye capers.
Ndiyo imwe yemasosi atinoda kuperekedza hove ndiro yakabikwa kana yakabikwa. Zvinofambawo zvakanaka nemaprawns, king prawns nemaking prawns. Saka ikozvino iwe unogona kuona kuti chikafu ichi chakaitika sei.
1 Cod uye shrimp burgers ine tartar muto
2 Nzira yekuita sei munyu cod?
Delicious hove burgers. Super light uye nyore kugadzirira.
Nguva yekugadzirira: 14M
Nguva yakazara: 15M
50 g yeonikisi nyowani
250 g cod yakasvibiswa isina ganda kana mapfupa
70 g yemaprawoni
5 g zvimedu zvechingwa
1 zai chena
Tartar sauce (ona recipe)
Isa hanyanisi mugirazi uye ucheke iyo 4 masekondi, kumhanya 5. Isu tinobvisa uye tinochengetedza.
Isu tinoomesa cod zvakanaka nemapepa ekicheni uye tinoicheka Masekonzi mashanu, kumhanya 3.
Wedzera shrimp yakachekwa uye zvimwe zvese zvinoshandiswa. Fukidza nemunyu uye pepper uchifunga nezvepfungwa yekodha. Isu tinosanganisa panguva Masekondi gumi neshanu, kumhanya 10, kuruboshwe.
Isu tinogadzira mabhora e50 magiramu uye, nerubatsiro rwekuki cutter kana mhete yeplating, tinoigadzira kuita hamburger.
Rega vazorore mufiriji kwemaawa mashoma kuti vagadzirise.
Isa mafuta mashoma emuorivhi mupani kana mugango wobva washava kusvika aita ruvara rwegoridhe rakanaka.
Paunenge uchishumira, zviise mundiro ine tartar sauce.
Kana mukanyiwa wakanyanya crumbs tinogona kuwedzera zvishoma zvimedu zvechingwa kuti zvibatsire kuzvibatanidza.
Nzira yekuita sei munyu cod?
Cod ine munyu ndeimwe yeaya echinyakare mabikiro aunogona kubika munzira dzine chiuru. Kunyangwe isiri isina njodzi, ndosaka zvakakosha kuziva nzira yekuibvisa nenzira kwayo.
Chinhu chokutanga chaunofanira kuita ndechokusarudza zvidimbu zvakanaka. Edza kuva akanyanya yunifomu zvinogoneka uye izvo hazvina zvikamu zvakakora uye zvakanaka kwazvo.
Kana zvasvika kune desalination, chinhu chekutanga kuita bvisa munyu wose izvo zvinotenderedza zvidimbu. Kuti uite izvi, chinhu chiri nyore ndechokuvaisa pasi pepombi nemvura inotonhora uye kwete yakasimba zvikuru. Unogona kuzvikwiza zvishoma kuti munyu wakakora ubude.
Zvidimbu zvinozoiswa mumudziyo wakavharwa nawo mvura inotonhora uye yakasiiwa ichinyungudutswa mufiriji kwemaawa ari pakati pe48 ne72, ichichinja mvura maawa gumi nemaviri oga oga.
Kuita chokwadi nzvimbo yemunyu, unogona kuravira zvishoma zvecod asi edza kuigadzira kubva pakakora zvakanyanya.
Uye kana ukashandisa cod crumbs Maawa makumi maviri nemana achakwana. Ramba uchifunga kuti zvimedu zvidiki uye zviri nyore kuita desalt.
Uye zvino zvawave nekodha yakagadzirira, unogona kuigadzirira nenzira dzine chiuru.
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Chikafu chine utano, Nyore, Hove
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Thermomix mapepa » Hove » Cod uye shrimp burgers ine tartar muto
Salată de boeuf, iyo saladi yeRussia kubva kuRomania
Orange Fanta muThermomix